Al-shabaab oo rasaas ku furtay aroos
3 Jan 3, 2013 - 10:08:54 AM
Haweeney ayaa ku dhimatay Sadex haween ah oo kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii Maleeshiyo ka tirsan Ururka Al-shabaab ay weerar ku qaadeen Xaflad Aroos oo shalay galinkii dambe ka dhacaysay deegaanka Booco oo ka tisran Gobolka Hiiraan.
Deegaankan oo 30-KM u jira Magaalada Baladweyne ee Xarunt Gobolka Hiiraan ayaa waxaa weli gacanta ku haysa Al-shabaab, iyadoo haweenkii ku dhaawacmay rasaastan lagu daweynayo Baladweyne.
“Maleeshiyada Al-shabaab waxay yimaadeen deegaanka oo Aroos ka socdo waxayna rasaas ku fureen haweenkii goobt ku ciyaaryay” ayay tiri mid ka mid ah haweenkii Arooska ka qaybgalayay oo Rasaasta ka badbaaday. Ururka Al-shabaab ayaa horay xadidaad ugu soo rogay aroosyada ay dadku ku sameysanayaan goobaha ay gacanta ku hayaan, iyagoo diiday in ciyaaro la sameeyo, waxaana falkan uu noqonayaa kii ugu horeeyay oo ka dhaca Gobolka Hiiraan.
Shacabka ku nool deegaanka Booco ayaa sheegay inay aad uga xumaadeen qaabka uu u dhacay falkan, waxayna Qaarkood oo Magacyadooda qariyay ay sheegeen in Al-shabaab ay cadaadis xoogan ku hayso dadka deegaankaas ku nool.
Maamulka DF ee Gobolka Hiiraan ayaan ka hadlin falkan ay Al-shabaab ka sameysay Deegaanka Booco, iyadoo sidoo kale aysan Al-shabaab ka hadlin falkan, waxaana arooskii uu baaqday markii rasaasta lagu furay.
Dalka Somalia ayaa waxaa aroosyada loo sameeyaan dabaaldagyo waaweyn oo farxad lagu gelinayo lamaanaha uu guurku dhexmarayo, balse falkan ayaa ka yaabiyay dad badan oo ku nool Gobolka Hiiraan iyo Gobolada kale ee Somalia.